Imandarmedia.com.np: बाढी-पहिरोपीडितको उद्धारका लागि विप्लव गुहार्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, के भने विप्लवले ?
Big News, Main News, News » बाढी-पहिरोपीडितको उद्धारका लागि विप्लव गुहार्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, के भने विप्लवले ?
बाढी-पहिरोपीडितको उद्धारका लागि विप्लव गुहार्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, के भने विप्लवले ?
देश बाढी-पहिरोग्रसित बनिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महसचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई गुहारेको छ ।
बिशेसगरी कोशी ब्यारेजमा पानीको सतह तीन लाख क्युसेक पुगेपछि ब्यारेजमा रातो बत्ती बलिरहेको छ । र ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न भारतीय पक्षले आनाकानी गरिरहदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगकर्ताले महासचिव विप्लवलाई देश बचाउन आउन् अपिल गरेका छन् ।
'विप्लव आउ, बाढी-पीडित बचाउ, वीप्लव दाई कोशी ब्यारेज बम हानेर खोल्नुपर्यो, अनुमति पाउँ विप्लव दाई बम हानेर कोशी ब्यारेजका ढोका खोल्छौं, मधेश डुब्न लाग्यो' जस्ता स्टाटसहरुले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ ।
यसअघि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्दा पनि विप्लवलाई यसरी नै सामाजिक सञ्जालले देश बचाउन आग्रह गरेका थिए । नेकपा कार्यकर्ताबाहेक अन्य पार्टीका युवाहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विप्लवलाई गुहारेका छन् ।
पार्टी महासचिव विप्लवले जनताको उद्दारका लागि खटिन नेता कार्यकर्तालाई हिजै शनिबार नै निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उता नेकपा चितवन, बाके, बर्दिया, सप्तरी, झापा, सुनसरी लगाएतका इन्चार्जहरु कार्यकर्ताहरुसंगै बाढीपीडितहरुको उद्दारमा खटिएका छन् ।
केहीदिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढी र डुबानले जनजीवन निक्कै अस्तव्यस्त बनेको छ । बाढी-पहिरोबाट अहिलेसम्म देसभर ५९ जनाको ज्यान गइसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
२०७४ साउन २९ मा प्रकाशित ।